အီကွေဒေါနိုင်ငံ | ခရီးသွားလမ်းညွှန် & ခရီးသွားအပန်းဖြေကမ္တာ့ဆောင်းပါးများ WebSite.WS | GVMG - ကမ္တာ့ Viral စျေးကွက်အုပ်စု
ခရီးသွားလမ်းညွှန် & ခရီးသွားအပန်းဖြေကမ္တာ့ဆောင်းပါးများ WebSite.WS > အီကွေဒေါနိုင်ငံ
Until roughly 30 လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်းများစွာ, Columbia wasapeaceful country. Rebel groups and the influence of cocaine production have changed that. Here's an overview of Columbia for travelers.
The Wonderful Creatures of The Galapagos Islands A wonder of creation, the Galapagos Islands have captured the imagination of poets and biologists alike. Separated from the mainland in the waters of Ecuador, evolution created stunning endemic creatures such as the giant tortoise and the sea iguana, animals found only on the Galapagos. The most groundbreaking work ever to be published concerning evolution, 'The Origin of Species', was based on observations made on the Galap...
အီကွေဒေါနိုင်ငံခရီးသွား '' ကွီ, မီးတောင်, Galapagos ကျွန်း
အဆိုပါ Andeas မှာတည်ရှိပါတယ်, အီကွေဒေါခရီးသွားများအတွက်ပယောဂတစ်ပြည်. အီကွေဒေါမှခရီးသွားနှင့်သင်အမေဇုံခရီးစဉ်မှာနိုင်ပါတယ်, မီးတောင်တက်, သို့မဟုတ်မုန့်လှပသောကမ်းခြေပေါ်. ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်အီကွေဒေါမှသွားလာရန်အကြီးမားဆုံးအကြောင်းရင်းနာမည်ကြီး Galapagos ကျွန်းမှတစ်ဦးအလည်အပတ်ဖြစ်ပါသည်. မည်သို့ပင်သင့်ရဲ့ preference ကို၏, အောက်ပါဆွဲဆောင်မှုအားလုံးကြည့်ရကျိုးနပ်များမှာ.
စျေးပေါတဲ့ Airfare ရှာမည်နည်း
စျေးပေါ airfare တွေ့ရှိရန်, ခရီးသွားအေဂျင်စီများမေ့လျော့. အဆိုပါအပေးအယူယခုအွန်လိုင်းများမှာ. အဘယ်ကြောင့်သင့်ကိုယ်ပိုင်ရှာဖွေရေးလုပ်ဖို့အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းသင်ယူမဟုတ်?
အလင်းသည်ခရီးသွား – သယ်-တွင်သာလျှင်
အလင်းကိုခရီးသွားအရာအားလုံးရိုးရှင်းတဲ့စေသည်, ဘေးကင်းနည်းစိတ်ဖိစီးမှု. အီကွေဒေါနိုင်ငံအတွက်ခြောက်ပတ်အတွင်း, ရေခဲမြစ်-ဖုံးလွှမ်းသောတောင်ထိပ်ကနေ, ပစိဖိတ်ကမ်းရိုးတန်းကမ်းခြေရန်, တစ်ဦးတည်းသာအတူသယ်မည့်အိတ်ပေါ်အိတ်တစ်ဦးချင်းစီအတွက်လိုအပ်.
ရုံဆယ်ပေါင်သယ်အပေါ်အိတ်နှင့်အတူနိုင်ငံတကာခရီးသွား? သငျသညျအလောငျးအစား. အလင်းသွားကြဖို့ကောင်းသောအကြောင်းပြချက်ရှိပါတယ်, ထိုသို့သင်ထင်လိမ့်မယ်ထက်ပိုမိုလွယ်ကူဖြစ်ပါသည်.
အဆိုပါအကောင်းဆုံးရိုမန်းတစ်အားလပ်ရက် – ငါးအကြံပြုချက်များ
What are the best romantic vacations? Thet are vacations that giveacouple some time alone, and some time to do things together. Here are five examples.
တစ်ဦး Gap တစ်နှစ်တာဘာလဲ? ကျွန်တော်ဘာလုပ်ပေးရမလဲ?
We were under the volcano, in the town of Baos, အီကွေဒေါနိုင်ငံ. On the days agenda? Watch it erupt, have lunch foradollar, hike to waterfalls and dance all night.
The first time I used an ice axe and crampons, I went to 20,600 feet withaguide who didn't speakaword of English.
စျေးပေါအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာခရီးသွားမှအစစ်အမှန်လျှို့ဝှက်ချက်ကဘာလဲ? ဒါကြောင့်ဒီထက်အဘို့ဘာမှလုပ်နေဖို့လျှို့ဝှက်ချက်ကဲ့သို့တူညီသောင်. တစ်ဦးအခှငျ့အရေးဖြစ် Learn. အခွင့်အရေးယူခရီးသွားများအတွက်ပိုပြီးသွားလာရ, ပိုပြီးကြည့်ရှု & ပိုမိုလုပ်ဆောင်. သင်ခန်းစာ၏, သငျသညျန့်အသတ်ငွေကြေးကိုရှိပါကသင်သည်ဤအကြံပေးချက်ကိုလစျြလြူရှုနိုင်ပါတယ်.
အဆိုပါ “Enchanted Isles” A Wildlife Paradise
The resident clown grabsatwig from the dirt, waves it in the air and then places it at the feet of the object of his affection. A blue foot raised, and then the other. Head held high, he unruffled the full stretch of his wings and whistles skywards. Even the quietest honk from his beloved brings satisfaction and justification for this comical dance, and it begins all over again. But here on the volcanic islands of the Galapagos, အချို့သော 600 miles from mainland Ecuador, အ ...
တစ်ဦးက Maui တွင်အားလပ်ရက်မူလစာမျက်နှာငှားရမ်းခြင်းရွေးချယ်ခြင်း
အဆိုပါ '' လင်ကွန်း၏မြေယာ '' အသက်: အီလီနွိုက်စ Explore – အီလီနွိုက်ပြည်နယ်ခရီးသွားပြန်ကြားရေး
အဆိုပါ3သင့်ရဲ့ Next ကိုအားလပ်ရက်များအတွက်အကောင်းဆုံးမိသားစုခရီးသွားဦးတည်ရာနေရာများ
ရထားလမ်း Passes ဥရောပတစ်လျှောက်လုံးလျှော့ရထားခရီးသွားဝေငှ
အယ်လ်ဘေးနီးယား ‘ Tirana, Korca, and Petrela Castle
အားလပ်ရက်နဲ့အတူတစ်ဦးက RV လမ်းမကြီးခရီးစဉ် Resorts လူ့ ယူ.